A Complete Guide ku MCSA 2016 Certification | ITS
Ndiani anogona kuenda MCSA 2016 certification?
Anonyadzisa uyo anoda kutanga maitiro ake muMicrosoft server infrastructure infrastructure.
Nyanzvi inofanirwa kugadzirisa unyanzvi hwake hwepamusoro kubva pane imwe yakagadzirwa sevha kune yakawanda yapfuura
Datacenter Vatongi / mapurisa
Nhamba ipi yeongororo iripo?
Kugumisa MCSA unofanirwa kuratidza zvitatu.
Nhamba yei mabhuku iripo?
Kune mabhuku matatu ekumutsa MCSA
Pane chimwe chinhu chakakosha here chechi chiziviso?
b.Kana iwe uri MCSA 2012 akachengetedzwa, panguva iyoyo iwe unogona kuvhara chiziviso chako pa MCSA 2016 nokupa imwe kuongorora (70743)
Nei MCSA ine Server 2016
Iyi seva inoshandisa system yakaratidza tani yezvinhu zvitsva zvinogona kukutora iwe pahutano hwakasiyana-siyana hwehutungamiri, uyezve nekukubatsira iwe kuchengetedza mari yekushamwaridzana kwako. Heino urongwa hwezvinhu zvitsva zvinowanikwa muWindows 2016.
Software Inotsanangurwa Datacenter
Server 2016 inokupa kuti uchinje kugadzirisa uye inodhura dhiacenter, iyo patinogona kushandisa purogiramu-yakatsanangurwa, Kuchengetedza uye kusungirirana kwekugadzira datacenter yedu. [Kwete kupfuura chero mubvunzo kana izvi zvakarurama. ]
Shanduro 2016 inopa Virtual Virtualization in hyper-v, saka iko zvino unogona kuudza hyper-v mukati memashini chaiwo.
Microsoft inopa server yakakosha, iyo yakakosha kudarika server.
Kupa shanduro yekuzviparadzanisa kuimba mazitapace innovation.
Tipei oga kune hyper-v
Kutarisira mahwindo uye hyper v.
Inokuita kuti utaure seVM yako kubva paHOST pasina imwe sarudzo.
Iye zvino tinogona kuita chizvarwa 2 linux VM mu hyper-v.
Kuita kutungamira kweVM dzakasiyana-siyana kuderera
Ita gore ripupurire kuburikidza nekushandisa kuwedzera
Kuchengeta agnostic block replication level
Kuchengetedza nzvimbo yakajeka kunobvisa kudiwa kweSAS yakagoverwa.
Shanduro yemagetsi inokupa kugadzirwa kwekuzadzisa SDN.
Izvi ndezvenhoroondo yose kwete zvitsva bedzi zvatinazvo muSeva 2016, inongova yepamusoro chete. Iwe uchava nezvakawanda pane izvi mu MCSA yako chiyeuchidzo.
Paunenge wapedza MCSA yako chiziviso ne server 2016 iwe uchava nekwanisi yekushanda nayo
Kuiswa, kuchengetedza uye kuverenga, DSC
Networking iyo IPV4 / 6, SDN, NPS, NAP, VPN, DAS, inoronga hutsika.
Kuzivikanwa kunoreva ADDS, ADRMS, ADFS, ADCS, DAC, Azure AD.
MCSA yakavimbiswa Professional - Hurukuro Mibvunzo neMhinduro